कसैले नपत्याएका पेप गुवार्डीवाला यसरी बने विश्वकै सफल प्रशिक्षक
एजेन्सी । विश्वमा चर्चित र सफल प्रशिक्षकका रुपमा चिनिन्छन् पेप गुवार्डीवाला । छोटो कार्यकालमा नै युरोपका प्रमुख उपाधिहरु जिताउन सफल पेपको जन्म सन् १९७१, १८ जनवरीमा भएको थियो ।
बाल्यकालदेखि नै फुटबलमा रुची भएका उनको खुट्टामा प्राय फुटबल नै हुने गथ्र्यो । आफ्नो घर पछाडिको मैदानमा उनी फुटबल अभ्यास गरिरहन्थे । सामान्य परिवारमा जन्मेका उनलाई पिता भलेन्टी गुवार्डीवालाले ठुलो प्रेरणा दिएका थिए । पेप जन्मेको गाउँ छाड्न नमान्ने उनीहरु छोराको कारण आफुहरुको जीवन धन्य भएको समेत बताउँछन् ।
ला लिगा र च्याम्पियन्स लिगमा रियल मड्रिडको दबदबा रहेको थियो । बार्सिलोना भने नयाँ प्रशिक्षकको खोजीमा थियो । अन्ततः बार्सिलोनाले क्लबको ‘बी’ टिमका प्रशिक्षक पेप गुवार्डीवालालाई नियुक्त गर्यो । रियल मड्रिडको दबदबा तोड्न बार्सिलोनालाई दबाब थियो । सन् २००८ मा बार्सिलोनाले जब पेप गुवार्डीवालालाई प्रशिक्षकको रुपमा नियुक्त गर्यो तब बार्सिलोनाका सबै फ्यानहरु आश्चर्य चकित परे ।
धेरैले भने बार्सिलोनाले जुवाँ खेल्दैछ । पेप खासै चर्चित खेलाडी पनि थिएनन् । तर, उनलाई चर्चा पाउन एक सिजन नै काफी रह्यो ।
उनले निरिह बनेको बार्सिलोना टोलीमा नाटकिय परिवर्तन ल्याउन सफल रहे ।
बार्सिलोना ‘बी’ मा उनलाई प्रशिक्षकको रुपमा नियुक्त गरियो । उनले तीस वर्ष यता कै सानदार खेल प्रदर्शन दिन सके । बार्सिलोना ‘बी’ को खेलमा एउटा सन्तुलन कायम गर्न उनी सफल रहे । सन् २००७–०८ को टेरसेरा डिभिजन च्याम्पियन्स जिताउन उनी सफल रहे ।
फ्रांक रिचकार्ड बार्सिलोना आएपछि उनले दुई कार्यकाल एकदमै सफल रह्यो । उनले दुईवटा लिग उपाधि र एउटा च्याम्पियन्स लिग उपाधि जिताउन सफल रहे । उनको कार्यकालमा नै लियोनल मेस्सी, जाभी, एन्द्री इनियस्टा जस्ता खेलाडीहरु बार्सिलोनाले पायो । तर, त्यसपछि लगातार बार्सिलोना दुई सिजन असफल रह्यो । यसको दबाब प्रशिक्षक रिचकार्डलाई पर्यो । बार्सिलोनाले अन्ततः नयाँ प्रशिक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय लियो । प्रशिक्षकको रुपमा, त्यसपछि सुरु भयो गुवार्डीवालाको बार्सिलोनामा यात्रा ।
बार्साले सन् २००८ पछि खेल्ने शैलीमा ठुलो परिवर्तन ल्यायो । गुवार्डीवालाको टोलीले ब्राण्ड फुटबल खेल प्रस्तुत गर्यो । उक्त सिजन बार्सिलोनाले लिग नौ अंकको फरकले जित्न सफल भयो । कोपा डेल रे को उपाधि उचाल्न सफल भयो । च्याम्पियन्स लिगमा पनि सानदार खेल प्रर्दशन गर्दै उपाधि उचाल्यो ।
बार्सिलोनाले पहिलोपटक इतिहास रच्दै तीनवटै उपाधि जित्न सफल रह्यो । उनको टोलीले तीन सिजन लगातार लिग उपाधि उचाल्न सफल । रह्यो । दुईवटा कोपा डेल रे दुईवटा च्याम्पियन्स लिगको उपाधि बार्साले आफ्नो पोल्टामा पार्यो । बार्सिलोनामा चार कार्यकाल बिताएका उनले १४ वटा उपाधिहरु जिताउन सफल रहे ।
१. ला लिगा च्याम्पियन्स (३)ः २००८–०९, २००९–१०, २०१०–११
२. च्याम्पिन्स लिग बिजेता (२)–२००८–०९, २०१०–११
३. कोपा डेल रे विजेता–२००८–०९, २०११–१२
४. फिफा वल्र्ड कप बिजेताः २००९, २०११
५. युरोपियन सुपर कप विजेताः २००९, २०११
६. स्पेनिस सुपरकोपा बिजेताः २००९, २०१०, २०११
बार्सिलोनामा चार कार्यकाल बिताएर जर्मन क्लब बार्यन म्युनिखमा उनी आवद्ध भए । उनले एक पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए,‘बार्सिलोनामा जे जति आउँथ्यो त्यो मैले दिने प्रयास गरे । चार वर्षको कार्यकालमा मैले सबै प्रयास गरे । अब मसँग केही थिएन । त्यसकारण बार्सिलोना छाड्दै नयाँ सोच बनाउन म नयाँ क्लबमा आवद्ध भएको हुँ ।’
बार्यन म्युनिखमा आएपछि पनि उनको सफलताले उचाइ चुमे । बार्यन म्युनिखका प्रशिक्षकले जुप हेन्याक्सले बार्यनलाई एउटा उच्च बिन्दुमा क्लबलाई पुर्याएका थिए । यसका कारण पनि पेपमाथि केही दबाब रहेको थियो । तर, पेप आफ्नो जिम्मेवारी निकै चलाखी पुर्ण ढंगले निर्वाह गरे । बुडेण्सा लिगमा राम्रो खेल प्रदर्शन गरेतापनि उनले च्याम्पियन्स लिग जिताउन भने सकेनन् । तीन वर्षको कार्यकालमा उनले बार्यन म्युनिख स्तरलाई सन्तुलित नै राखे ।
बुण्डेसा च्याम्पियन्सः२०१३–१४, २०१४–१५
पोकल विनर्सः २०१३, १४
सुपर कप विजेताः २०१३
फिफ वल्र्ड कपः २०१३
बार्यन म्युनिख पछि उनको यात्रा विश्वकै कठिन मानिएको लिग प्रिमियर लिगमा भयो । पहिलो कार्यकालमा खासै सफलता पाउन नसकेका उनले क्लबलाई सुधार्दै नयाँ टोली निर्माण गरे भने गएकाे सिजन उपाधि नै जिताउन सफल भए ।
बार्सिलोना तथा बार्यन म्युनिखका आफुलाई प्रमाणित गरिसके तापनि प्रिमियर लिगमा सफलता पाउन सफल भइसकेका छन् । म्यानचेस्टर सिटीमा रहेर उनले क्लबलाई सफल बनाउने उनी ढुक्क रहेका छन् ।
अब उनको लक्ष्य भनेको म्यानसिटीलाई च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जिताउनु हो । गएको सिजन विभिन्न रेकर्ड तोड्दै प्रिमियर लिगको उपाधि जितेको सिटीले यस सिजन च्याम्पियन्स लिग जित्ने तयारीमा रहेको छ ।
अनेरास्ववियुको पत्रकार सम्मेलन नेपाल र प्रचण्ड पक्षद्वारा बहिस्कार
काठमाडौँ । नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूको पत्रकार सम्मेलनलाई माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षधरले बहिस्कार गरेका छन् । चरम विवादमा फसेको अनेरास्ववियुको बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई नेपाल र प
टिफिनमा विस्फाेटक पदार्थ बाेक्ने राम सिंहकाे मृत्यु, एककाे अवस्था गम्भिर, तीनजना खतरामुक्त
धनगढी । बिहीबार बेलुकी धनगढीमा भएको बम विस्फोटमा घाइते भएको पाँचजनामध्ये एकजनाको मृत्यु भएको छ । विस्फोटमा परी बझाङ घर भएका ३५ वर्षीय राम सिंहको मृत्यु भएको हो । धनगढीको शहीदगेटस्थिथ निलम होटलम
चियासँगसँगै इलामकाे कफी पनि उत्कृष्ट
इलाम । इलाम चियाको राजधानी हो । यहाँ मानिस चिया किन्न मात्र नभई चियाबारी क्षेत्र घुम्न पनि आउने गर्छन् ।